“Imi Muri Zvapupu Zvangu”​—Isaya 43:10 | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mazatec (Huautla) Moore Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“‘Imi muri zvapupu zvangu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.”—ISA. 43:10.
VaIsraeri vaiva zvapupu zvaJehovha pakuti kudii?
Zita raMwari rinorevei?
Tingaratidza sei kuti tinoonga ropafadzo yokudanwa nezita dzvene raMwari?
1, 2. (a) Zvinorevei kuva chapupu, uye vanobudisa nhau vari kukundikana kuitei? (b) Nei Jehovha asingashandisi vanobudisa nhau kuti vanhu vazive nezvake?
ZVINOREVEI kuva chapupu? Rimwe duramazwi rinoti chapupu, “munhu anoona zvinenge zvaitika ozviudza vamwe.” Somuenzaniso, muguta rePietermaritzburg riri kuSouth Africa, mune pepanhau rinonzi The Witness (Chapupu) rava nemakore anopfuura 160 richibudiswa. Zita iroro rakanyatsokodzera nokuti chinangwa chepepanhau ndechokurondedzera zvakarurama zvinhu zvinenge zvaitika munyika. Mupepeti wokutanga wepepanhau iri akavimbisa kuti raizotaura “chokwadi.”
2 Zvisinei, zvinosuwisa kuti vanobudisa nhau munyika havatauri chokwadi. Havatauriwo chokwadi nezvaMwari uye zvaakaita. Mwari wemasimbaose akaudza muprofita wake Ezekieri kuti: “Marudzi achaziva kuti ndini Jehovha.” (Ezek. 39:7) Asi Changamire wezvinhu zvose zvakasikwa haashandisi vanobudisa nhau kuti vanhu vazive nezvake. Ane Zvapupu zvinoda kusvika mamiriyoni masere zvinoudza vanhu vemarudzi ose nezvake uye zvaakaitira vanhu kare uye mazuva ano. Zvapupu izvi zvakawanda zvinoudzawo vamwe zvinhu zvakanaka zvichaitirwa vanhu naMwari mune ramangwana. Kana tikaisa basa iri pokutanga muupenyu hwedu, tinenge tichiita zvinoenderana nezita redu ratakapiwa naMwari riri pana Isaya 43:10 panoti: “‘Imi muri zvapupu zvangu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘mushumiri wangu wandakasarudza.’”
3, 4. (a) Vadzidzi veBhaibheri vakatanga kushandisa riini zita idzva uye vakanzwa sei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) (b) Tichakurukura mibvunzo ipi?
3 Chokwadi tine ropafadzo inokosha kudanwa nezita raJehovha nokuti ndiye “Mambo asingagumi” uye anoti: “Iri ndiro zita rangu nokusingagumi, uye ndiro randichayeukwa naro kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa”! (1 Tim. 1:17; Eks. 3:15; enzanisa naMuparidzi 2:16.) Muna 1931, Vadzidzi veBhaibheri vakatanga kuzivikanwa nezita rokuti Zvapupu zvaJehovha. Pashure paizvozvo, tsamba dzakawanda dzokuonga dzakabudiswa mumagazini ino. Imwe ungano yokuCanada yakanyora kuti, “Mashoko okuti tiri ‘zvapupu zvaJehovha’ atifadza chaizvo uye aita kuti titsunge kurarama zvinoenderana nezita idzva iri.”
4 Ungaratidza sei kuti unoonga ropafadzo yokudanwa nezita raMwari? Uyewo, ungakwanisa here kutsanangura uchishandisa Magwaro chakaita kuti Jehovha azotidana kuti Zvapupu zvake?
ZVAPUPU ZVAMWARI ZVEKARE
5, 6. (a) Vabereki vechiIsraeri vaifanira kuva zvapupu zvaJehovha pakudii? (b) Ndezvipi zvimwe zvakarayirwa vabereki vechiIsraeri kuti vaite uye nei izvozvo zvichishandawo kuvabereki mazuva ano?
5 MuIsraeri mumwe nomumwe akararama mumazuva aIsaya aiva ‘chapupu’ chaJehovha uye rudzi rwacho rwose rwaiva “mushumiri” waMwari. (Isa. 43:10) Vabereki vechiIsraeri vaipupurira nezvaJehovha pavaidzidzisa vana vavo zvakaitirwa madzitateguru avo naMwari. Somuenzaniso, vaIsraeri pavakarayirwa kuti vachengete Paseka yaiitwa gore negore vakaudzwa kuti: “Vanakomana venyu pavanoti kwamuri, ‘Basa iri rinorevei kwamuri?’ imi muti, ‘Ichi chibayiro chepaseka chinobayirwa Jehovha, akadarika dzimba dzevanakomana vaIsraeri muIjipiti paakatambudza vaIjipiti, asi akanunura dzimba dzedu.’” (Eks. 12:26, 27) Vabereki ivavo vanogona kunge vaitsanangurirawo vana vavo kuti Mosesi paakatanga kuenda kuna mambo weIjipiti achikumbira kuti vaIsraeri vabvumirwe kuenda kunonamata Jehovha murenje, Farao akapindura kuti: “Jehovha ndianiko, kuti nditeerere inzwi rake kuti ndirege Israeri achienda?” (Eks. 5:2) Uyewo vanogona kunge vaiudza vana vavo kuti pashure pokunge matambudziko gumi aparadza nyika uye pashure pokunge vaIsraeri vanunurwa mumaoko evaIjipiti paGungwa Dzvuku, mhinduro yemubvunzo waFarao yakazobuda pachena. Jehovha akaratidza kuti ndiMwari Wemasimbaose uye ndizvo zvaachiri. Uyewo vaIsraeri vakanyatsoona kuti Jehovha ndiMwari wechokwadi uye kuti anozadzisa zvaanovimbisa.
6 Zviri pachena kuti vaIsraeri avo vaikoshesa ropafadzo yokudanwa nezita raJehovha, vaisangoudza vana vavo zvinhu izvi zvinoshamisa, asi vaiudzawo vatorwa vainge vava varanda vavo. Vakarayirwawo kuti vadzidzise vana vavo kuchengeta mitemo yaMwari yokuti varambe vari vatsvene. Jehovha akati: “Munofanira kuva vatsvene, nokuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene.” (Revh. 19:2; Dheut. 6:6, 7) Chokwadi iwoyo muenzaniso wakanaka kuvabereki vechiKristu mazuva ano nokuti vanofanirawo kudzidzisa vana vavo kuti vave vatsvene zvoita kuti vakudze zita raMwari!—Verenga Zvirevo 1:8; VaEfeso 6:4.
Kudzidzisa vana vedu nezvaJehovha kunoita kuti zita rake rikudzwe (Ona ndima 5, 6)
7. (a) VaIsraeri pavainge vakatendeka kuna Jehovha, mamwe marudzi aiva pedyo aiita sei? (b) Vose vanodanwa nezita raMwari vanofanira kuitei?
7 Saka vaIsraeri pavainge vakatendeka vaipupurira zvakanaka zita raMwari. Vainge vaudzwa kuti: “Marudzi ose epanyika achafanira kuona kuti zita raJehovha rashevedzwa pauri, uye chokwadi achakutya.” (Dheut. 28:10) Asi vaIsraeri vaigara vachitadzira Jehovha. Vairamba vachinamata zvidhori. Uyewo vainge vava neutsinye kungofanana navanamwari vevaKenani vavainamata, vachipa vana vavo sezvibayiro uye vachidzvinyirira varombo. Izvi zvinotidzidzisa kuti tinofanira kuedza kuva vatsvene tichitevedzera Mwari Mutsvenetsvene ane zita ratinodanwa naro.
“TARIRAI! NDIRI KUITA CHINHU CHITSVA”
8. Isaya akapiwa basa rei naJehovha uye akaita sei?
8 Jehovha ainge ataura nezvokununura kwaaizoita vaIsraeri. (Isa. 43:19) Zvitsauko zvitanhatu zvokutanga zvebhuku raIsaya zvinonyanya kutaura nezvenyevero yedambudziko raizowira Jerusarema uye maguta aiva akaripoteredza. Jehovha uyo anonyatsoona zviri pamwoyo akaudza Isaya kuti arambe achizivisa nezvenyevero iyi kunyange zvazvo aizoudza vanhu vainge vakaoma musoro. Isaya akanetseka nazvo uye aida kuziva kuti rudzi rwaMwari rwaizoramba rwusingapfidzi kusvika riini. Mwari akapindura kuti: “Kusvikira maguta ava matongo, asisina anogara maari, dzimba dzisisina munhu wepanyika anogaramo, uye nyika yacho yaparadzwa, yava nzvimbo isina chinhu.”—Verenga Isaya 6:8-11.
9. (a) Uprofita hwaIsaya hwaitaura nezveJerusarema hwakazadziswa riini? (b) Mazuva ano inyevero ipi yatinofanira kufunga nezvayo?
9 Isaya akapiwa basa iri mugore rokupedzisira rokutonga kwaMambo Uziya kana kuti munenge muna 778 B.C.E. Akaramba achiprofita kwemakore anenge 46 kusvikira gore ra732 B.C.E. rapfuura, Mambo Hezekiya ava kutonga. Painge pachine makore 125 Jerusarema risati raparadzwa muna 607 B.C.E. Saka vanhu vaMwari vakapiwa nyevero yezvaizoitika kurudzi rwavo pachine makore akawanda. Mazuva ano, Jehovha ari kushandisawo vashumiri vake kuti vanyevere vanhu zvakakwana nezvezvichaitika pamberi apa. Kubvira payakatanga kubudiswa, makore 135 akapfuura, magazini yeNharireyomurindi yave ichikurudzira vaverengi vayo kuti vazive kuti kutonga kwakaipa kwaSatani kwava kuda kutsiviwa neKutonga kwaJesu Kristu Kwemakore Ane Chiuru.—Zvak. 20:1-3, 6.
10, 11. VaIsraeri vaiva kuBhabhironi vakaona kuzadziswa kupi kwouprofita hwaIsaya?
10 VaJudha vakawanda avo vakazviisa mumaoko evaBhabhironi vakapona pakaparadzwa Jerusarema uye vakatapwa vakaendeswa kuBhabhironi. (Jer. 27:11, 12) Papera makore 70 vari ikoko, vakazoona kuzadziswa kwouprofita hwokuti: “Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri wenyu, Mutsvene waIsraeri: ‘Ndichatuma vanhu kuBhabhironi nokuda kwenyu uye ndichawisira pasi mizariro yemajeri.’”—Isa. 43:14.
11 Uprofita ihwohwo hwakazadziswa zvinoshamisa humwe usiku muna October 539 B.C.E. Mambo weBhabhironi nemakurukota ake pavainwira waini mumidziyo mitsvene yainge yapambwa mutemberi yeJerusarema uye vachirumbidza vanamwari vavo, mauto eMedhiya nePezhiya akakunda Bhabhironi. Muna 538 kana kuti 537 B.C.E., Koreshi uyo ainge akunda Bhabhironi akarayira vaJudha kuti vadzokere kuJerusarema uye vanovaka temberi yaMwari. Zvose izvi zvainge zvaprofitwa naIsaya kusanganisira vimbiso yaJehovha yokuti aizopa vanhu vake vainge vapfidza zvokurarama nazvo uye aizovadzivirira pavaizodzokera kuJerusarema. Mwari akavati “vanhu vandakazviumbira, kuti varondedzere kurumbidzwa kwangu.” (Isa. 43:21; 44:26-28) Pashure pokunge vaJudha ava vadzokera uye vavaka temberi yaJehovha muJerusarema, vakaona uchapupu hwokuti Jehovha, Mwari wechokwadi chete, anogara achizadzisa shoko rake.
12, 13. (a) Ndivanani vakabatana nevaIsraeri pakadzorerwa kunamata kwechokwadi? (b) “Mamwe makwai” anotarisirwa kuitei sezvaanotsigira “Israeri waMwari,” uye ane tariro yei?
12 Zviuru zvevanhu vaisava vaIsraeri zvakabatanawo nevaJudha pakunamata Mwari wechokwadi uye nokufamba kwenguva, vanhu vemamwe marudzi vakawanda vakazotendeukirawo kuchiJudha. (Ezra 2:58, 64, 65; Est. 8:17) Mazuva ano, “boka guru” re“mamwe makwai” aJesu rinonyatsotsigira vaKristu vakazodzwa avo vanoumba “Israeri waMwari.” (Zvak. 7:9, 10; Joh. 10:16; VaG. 6:16) Boka guru rinodanwawo nezita rokuti Zvapupu zvaJehovha.
13 MuKutonga kwaKristu Kwemakore Ane Chiuru, boka guru richafara chaizvo kuudza vanenge vamutswa kuti kuva Zvapupu zvaJehovha mumazuva okupedzisira enyika ino yakaipa kwainge kwakaita sei. Asi izvozvo zvinogona kuitika chete kana tikaramba tichirarama zvinoenderana nezita redu uye tikaedza kuramba tiri vatsvene. Uyewo, pasinei nokuti tinoedza zvakadini kuteerera Mwari, tinotadza, saka tinofanira kugara tichimukumbira ruregerero, tichiziva kuti kudanwa nezita rake dzvene iropafadzo yakakura.—Verenga 1 Johani 1:8, 9.
14. Zita rokuti Jehovha rinorevei?
14 Kuti tiwedzere kukoshesa ropafadzo yokudanwa nezita raMwari, zvakanaka kuti tifungisise zvarinoreva. Zita raMwari, iro rinowanzoshandurwa kuti “Jehovha,” rinobva pashoko rechiito rechiHebheru rinogona kushandurwa kuti “kuva.” Saka zita rokuti Jehovha rinonzwisiswa seshoko rinoreva kuti “Anoita Kuti Zvinhu Zvive Sezvaanoda.” Tsanangudzo iyi inonyatsokodzera zvinoitwa naJehovha seMusiki wezvinhu zvose uye semuzadzisi wechinangwa chake. Anoramba achiita kuti kuda kwake uye zvinangwa zvake zvizadzike pasinei nezvingaitwa nevavengi vake vakadai saSatani.
15. Tingadzidzei nezvezita raJehovha kubva pane zvaakaudza Mosesi? (Ona bhokisi rakanzi “ Zita Rine Zvarinoreva.”)
15 Jehovha paakapa Mosesi basa rokutungamirira vanhu vake kubuda muIjipiti, akataura chimwe chinhu chinotibatsira kuona kuti ndiMwari akaita sei nokushandisa kwaakaita shoko rechiito rakada kufanana nerokuti “kuva” achitsanangura zita rake. Bhaibheri rinoti: “Mwari akati kuna Mosesi: ‘Ndichava Iye Wandichava’ [kana kuti “Ndichava Zvandichasarudza Kuva”]. Akatizve: ‘Uti kuvanakomana vaIsraeri, “Ndichava ndiye andituma kwamuri.”’” (Eks. 3:14) Saka Jehovha achava chero zvaanoda kuva kuti azadzise chinangwa chake. KuvaIsraeri vaimbova varanda akava Mununuri, Mudziviriri, Mutungamiriri uye akavapa zvose zvavaida pakurarama uye pakunamata.
KURATIDZA KWATINGAITA KUTI TINOONGA
16, 17. (a) Tingaratidza sei kuti tinoonga ropafadzo yokudanwa nezita raMwari? (b) Tichakurukurei munyaya inotevera?
16 Mazuva ano, Jehovha anoramba achiita zvinoenderana nezita rake nokutipa zvose zvatinoda pakunamata uye pakurarama. Asi zita raMwari haringorevi zvaanosarudza kuva iye pachake. Rinorevawo kuti anogona kuita kuti Zvapupu zvake zvikwanise kuita zvaanoda kuti azadzise chinangwa chake. Kufungisisa izvozvo kuchaita kuti tide kurarama zvinoendererana nezita rake. Kåre, ane makore 84, uyo ave ari Chapupu chinoshingaira kuNorway kwemakore 70 anoti: “Ndinokoshesa chaizvo ropafadzo yandiinayo yokushumira Jehovha, Mambo asingagumi, uye kuvawo mumwe wevanhu vanodanwa nezita rake dzvene. Ndine ropafadzo yakakura kuudza vanhu chokwadi cheBhaibheri uye kuvaona vachifara chaizvo pavanochinzwisisa. Somuenzaniso, ndinonzwa kugutsikana chaizvo pandinovadzidzisa kuti chibayiro chorudzikinuro chaKristu chinoshanda sei uye kuti chinogona kuvabatsira sei kuti vawane upenyu husingaperi munyika itsva ine rugare uye yakarurama.”
17 Ichokwadi kuti mune dzimwe ndima, zviri kuramba zvichioma kuwana vanhu vanoda kudzidza nezvaMwari. Asi sezvinoita Kåre, haunzwi kufara here paunowana munhu anofarira womudzidzisa nezvezita raJehovha? Zvisinei, tingava sei Zvapupu zvaJehovha uku tichivawo zvapupu zvaJesu? Mubvunzo iwoyo uchapindurwa munyaya inotevera.
Zita Rine Zvarinoreva
“Anoita Kuti Zvinhu Zvive Sezvaanoda”
Nei zita iroro rakamukodzera
Jehovha akasika zvinhu zvose
Anoramba achiita kuti zvaanoda uye chinangwa chake zvizadzike
Achava chero zvaanoda kuva kuti azadzise zvaanovimbisa
Anoita kuti zvinhu zvaakasika zviite chero zvaanoda kuti azadzise chinangwa chake
Haana chaasingakwanisi kuita kana kukonzera kuti chiitike kuitira kuti azadzise chinangwa chake